ကျန်းမာရေး Archives - Page2of5- Uptodate MM
By Uptodate MMPosted on May 26, 2019
အသက် ၉၀ ဆယ်ကျော် အဖိုးတယောက့်ရဲ အလွယ်ကူဆုံးနဲ ကျန်းမာရေးဒေါင်ဒေါင်မြည်တဲ့ ဆေးနည်း ” အသက်” လေးရယ်ရှည်စေလို မန်းတောင်ရိပ်ခိုတဲ့ အဲဒါသီချင်းပါ တကယ်မဟုတ်ပါဘူးတကယ်က ဒီလိုပါ။ ငှက်ပျောဖီးကြမ်း အမှည့်ကို အခွန်ပါအပါ ရေစင်အောင်ဆေး လိုက်ပါ။ ပြီရင် […]
‘လက်ကအနာက ယားနေလို့ ဆေးခန်းသွားပြရာမှ ဆရာဝန်က ရေသောက်ကြည့် ခိုင်းတဲ့အခါ
‘လက်ကအနာက ယားနေလို့ ဆေးခန်းသွားပြရာမှ ဆရာဝန်က ရေသောက်ကြည့် ခိုင်းတဲ့အခါ အဲ့ဒီနေ့တော့ တော်တော်ကိုအမှတ်တရဖြစ်ခဲ့တဲ့နေ့…ဆေးခန်းမှာလူနာရှုပ်တဲ့နေ့၊လူနာများတာမဟုတ်ဘူး…။လာတဲ့လူနာတွေလည်းကြည့်လိုက်ဦး၊ဆိုင်ကယ်မှောက်တဲ့လူနာက၂ယောက်။တစ်ယောက်အနာကကြီးတော့ ချုပ်ပေးရမှာ။ခေါင်းပေါ်သစ်သားချောင်းပြုတ်ကျပြီး ခေါင်းပေါက်တဲ့ လက်သမားဆရာက တစ်ယောက်၊သူလည်းချုပ်ရမှာပဲ….အိမ်အောက်မှာက နှလုံးရောဂါနှင့်အမေကြီးကို oxygenပေးထားရတယ်။ခေါင်းချုပ်နေတုန်းမှာပဲ အဲ့လူနာရောက်လာတာ….ကိုယ်လည်းချုပ်ရင်းနှင့်ပဲ မေးရတယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲ ဦးလေး ထွေထွေထူးထူးတော့ဟုတ်ပါဘူး လက်ကအနာလေးလာပြတာပါ […]
မြန်မာပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးအဆင့် နောက်ဆုံးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တဲ့ ၀မ်းနည်းစရာ ဖြစ်ရပ်တခု
By Uptodate MMPosted on May 25, 2019
မြန်မာပြည်ဟာ ကမ္ဘာပေါ်မှာ ကျန်းမာရေးအဆင့် နောက်ဆုံးဆိုတာကို သက်သေပြလိုက်တဲ့ ဖြစ်ရပ်တခု ကျွန်တော့်ဇနီးဆုံးတာ ဒီနေ့တစ်လပြည့်ပါပြီ…. အရမ်းကိုပျော်ရွှင်စရာကောင်းခဲ့တဲ့ မိသားစုလေး အခုလို သေကွဲကွဲပြီး ပြိုကွဲရမယ်ဆိုတာ ဘယ်တုန်းကမှ မတွေးထား တဲ့အရာတစ်ခုပါ… လေးနှစ်အရွယ် သားလေးအတွက် နောက်ထပ်မွေးချင်းတစ်ယောက်လောက် ထပ်မွေးပေးချင်ခဲ့တာ […]
စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး FDA က “အထူးသတိပေး ကြေငြာချက်” ထုတ်ပြန်ထား
ပဲပြားများနှင့် ပတ်သက်၍ စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး FDA က “အထူးသတိပေး ကြေငြာချက်” ထုတ်ပြန်ထား မုံရွာမြို့နယ်ရှိ သာစည်ဈေးနှင့် သံလမ်းဈေးများတွင် ရောင်းချလျှက်ရှိသော အင်္ဂလိပ်အက္ခရာ(I)စာလုံးပါရှိသည့် ပဲပြားအစိုတုံးများတွင် ခွင့်မပြုဓာတုပစ္စည်း(Formalin)(ဖော်မလင်)များ ပါရှိကြောင်း….. စစ်ဆေးတွေ့ရှိရပါသဖြင့် ၎င်းအမှတ်တံဆိပ်ပါ ပဲပြားများအား ၀ယ်ယူရောင်းချခြင်း၊ […]
ကြောက်ခမန်းလိလိ ကြာလေ ပိုဆိုးတောလက်ကျေးးရွာအထိ ပျံနှံနေပါပြီ။
ကြောက်ခမန်းလိလိ ကြာလေ ပိုဆိုးတောလက်ကျေးးရွာအထိ ပျံနှံနေပါပြီ။ ယခုပိုစ့် တင်ပေးထားပါသော မကွေးတိုင်း အထက်မင်းလှမြို့မှ ဒေါက်တာ ရဲထွန်းဇော်အား ပြည်သူလူထုကိုယ်စား ကျေးဇူး အထူးတင်ရှိပါကြောင်း။ “သုံးရောင်ခြယ် အသံတိတ် လူသတ်သမား” အနီရောင် ၊ လိမ္မော်ရောင် ၊ […]
တစ်လ တစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ခန့်စားပေးခြင်း ဖြင့် ကျန်းမာ လန်းဆန်း လာပါလိမ့်မည်
By Uptodate MMPosted on May 24, 2019
အသက် ၄၀ ကျော် လာတာနဲ့ယောင်္ကျား ဖြစ်ဖြစ် မိန်းမ ဖြစ်ဖြစ် ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ခမ်းလာ တတ်ပါတယ် ။ အိမ်ထောင်သည်တွေ ပိုဆိုး ပါတယ် ။ ရိုးတွင်း ချဉ်ဆီ ခမ်းလာရင် အရွယ်ရင့်မြန်လာခြင်း […]
ဆေးကုလားမကို ငှက်သိုက်အားဆေးဆိုပြီး ထိုင်းတွေက ဗမာကို ဂျင်းထည့်
By Uptodate MMPosted on May 13, 2019 May 13, 2019
ဈေးကြီးပေးဝယ်ရတဲ့ ထိုင်းကလာတဲ့ငှက်သိုက်ဘူးတွေထဲမှာ သကြားနဲ့ ဆေးကုလားမတွေပဲပါတယ်တဲ့….. ဆေးကုလားမကို ငှက်သိုက်အားဆေးဆိုပြီး ထိုင်းတွေက ဗမာကို ဂျင်းထည့်ထားတာပါ။ လျှော်ဖြူ (ခ) ဆေးကုလားမ (Botanical name = Sterculia versicolor wall) အပင်က ထွက်တဲ့ […]
By Uptodate MMPosted on April 14, 2019
ငါ့ . ရည်ကိုအပြင်ထုတ်ပစ်တာဟုပြောပြီးကိုယ်ဝန်(၃)လရသည်အထိအကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မပြုကျင့်မှု (၇-၄-၂၀၁၉)ရက်နေ့(၈:၀၀)နာရီ အချိန်ခန့်ကျောက်တံခါးမြို့ ကွင်းမြောက်ရပ်ကွက်နှင်းဆီလမ်းနေသူ ဦးထွန်းဝေ(ဘ)ဦးကျော်စိန်(၅၈)နှစ်မှတစ်ရပ်ကွက်တည်းနေသူအိမ်ချင်းကပ်လျက်မ×××××××(ဘ)ဦးဇော်မိုး(၁၈)နှစ်အားကာမ ရာဂစိတ်အား ထိန်းချုပ်နိုင်ခြင်းမရှိသောကြောင့်သတ်ပစ်မည်ဟု ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုကာ အလိုမတူပဲကိုယ်ဝန်(၃)လ ရသည်အထိ အကြိမ်ကြိမ်အဓမ္မ ပြုကျင့်ခဲ့ပါသောကြောင့် ကျောက်တံခါးမြို့မရဲစခန်းတွင် အဒေါ်ဖြစ်သူနှင့် အစ်ကိုဖြစ်သူတို့နှင့်အတူမxxxxxမှ အမှုဖွင့်တိုင်ကြားခဲ့ပါသည်။ ဖြစ်စဉ်မှာ မ×××××သည် […]
အိပ်နေရင်း_သေသွားတယ် ….ဘယ်လိုသေသွားရတာလဲ ….
အိပ်နေရင်း_သေသွားတယ် ….ဘယ်လိုသေသွားရတာလဲ …. အိပ်နေရင်း_သေသွားတယ် ….ဘယ်လိုသေသွားရတာလဲ ….(ဒါမျိုးဘာလို့ဖြစ်သွားရတာလဲ လူတိုင်း သိထားဖို့ ပြန်လည်မျှဝေပါသည်။ အိပ်ယာအထမှာလိုက်နာစရာ…. အားလုံး အတွက်​ အ​ရေးကြီးလို့ မိတ်​​ဆွေ ဆရာဝန်​တစ်​​ယောက်​ ​ပြောပြထားတဲ့ ​ဟောဒီအချက်​​လေးကို သတိထားကြဖို့ မျှဝေပါရ​စေ။ ည […]
လေဖြတ် လူနာများသို့ဆရာတော် တစ်ပါးပေးတဲ့ဆေးနည်း လေးပါ လေဖြတ် လူနာများသို့ ဆရာတော် တစ်ပါးပေးတဲ့ ဆေးနည်း လေးပါ ။ လုံးဝ ပြန်ကောင်း ပါ တယ် ဆေးပရုပ် […]